Harder & Steenbeck: Teknụzụ ọhụụ maka agịga siri ike
Harder & Steenbeck etinyego nnukwu ego na akụrụngwa ha na Norderstedt, Germany. Ugbo elu ato nke CNC nke igwe ohuru emeputaghi nke oma imeputa ha, kama ha mepere uzo ohuru maka imeputa ihe na mmepe.
Ngwunye igwe na igwe igwe CNC ohuru na emejuputa igwe ihe ndi ugbua nke ekwesiri igwe Harder & Steenbeck, ebe igwe oru ohuru na-eme ka ihe ndi ozo di nma na etinyere ya ma eso ya.
Mana otu nke na-enye ndị ọrụ Harder & Steenbeck mmasị kachasị ukwuu bụ igwe ntanetị CNC ọhụụ. Ike nke igwe a putara na H&S nwere ike iweta echiche ohuru n’ebido ma mechaa agiri. Ya mere na enwere nnwere onwe ohuru a, ha bidoro nyochawa etu ha ga-esi ka mma!
Ihe mgbaru ọsọ mbụ, bụ ihe onye ọ bụla chọrọ site na agịga - ka sie ike! Ngwa ọhụụ nwere ike ịrụ ọrụ na iji zọpụta arịa ndị ọzọ dị egwu, yabụ, a na-emepụta agịga ọhụrụ site na ihe nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1/3 siri ike karịa nke gara aga.
Ma mgbe ahụ, mmebe ahụ… A na-eme ọtụtụ ihe n'oge na-adịbeghị anya “abụọ-taper” Ọ bụ eziokwu eziokwu bụ na agịga taper abụọ dị elu karịa agịga otu taper. Agbanyeghị, naanị ịbụ taper abụọ abụghị ihe mmesi obi ike nke ihe ịga nke ọma. H&S mụtara na isi ihe agba ahụ "gbaji" na agịga bụ isi okwu kachasị mkpa. Maka ọrụ zuru ezu, nke a bụ ebe ndị taper abụọ na-ezukọ.
H&S duziri ọmụmụ site na 2018 nke ogologo taper ogologo, akụkụ na otu esi agagharị agagharị n'etiti abụọ taper. Mgbe ọtụtụ ụdị, na oge dị ukwuu na-arụ ọrụ na ndị na-ese ihe, emepụtara nkọwapụta ọhụụ ọhụụ maka nha niile site na 0.15mm ruo na 0.6mm.
H&S jikwa ohere ahụ mee ka akara njirimara agịga na njedebe azụ dị mfe nghọta, dịka ị na-ahụ na foto a. Nozzles ugbu a na-ebukwa otu usoro dị mfe.
Nzaghachi na agịga ọhụụ bụ ihe niile H&S na - achọ - njikwa karịa na nkọwapụta, akara ndị ka mma na atọmịsọ kachasị mma site na oke mkpalite. Ha adịchaghị njọ itinye aka na nkụ ma n'ihi ihe nhịahụ siri ike na nrụzigharị edego, ha siri ezigbo ike karịa nsụgharị ndị gara aga.
Enweghị ederede metụtara.
Oge nzipu ozi: Dec-24-2019